ကမ်ဘာ့မီဒီယာတဈခုကဘာကွောငျ့ D’Day စဈကွညောရတာလဲ? မေးခှနျးကို Dr.ဆာဆာ ပွနျဖွေ – Sport Gaber
ကမ်ဘာ့မီဒီယာတဈခုကဘာကွောငျ့ D’Day စဈကွညောရတာလဲ? မေးခှနျးကို Dr.ဆာဆာ ပွနျဖွေ
ကြှနျတျောတို့ NUG အစိုးရက စဈအာဏာသိမျးပွီးကတညျးက သံတမနျနညျးလမျးပေါငျးစုံသုံးခဲ့တယျ နိူငျငံရေးကို နိူငျငံရေးလိုပဲသှားခဲ့တာ တဈကမ်ဘာလုံးက လူကွီးမငျးတို့ သိကွတယျမဟုတျလား။
ကမ်ဘာ့အကွီးမာဆုံး အဖှဲ့စညျးဖွဈတဲ့ UN ကလညျ။ အာဆီယံကို တောကျလြှောကျကွညျ့လာခဲ့ကွတယျ။ အာဆီယံရဲ့လုပျရကျကလညျ မွနျမာပွညျသူတှအေတှကျ နှဈပေါငျးမြားစှာ ဘာမှထိထိရောကျရောကျ လုပျပေးနိူငျတာမရှိခဲ့ဘူး။
တဈဘကျက ပွောမယျဆိုရငျ အာဆီယံအထူးကိုယျလဲရဲ့ တောငျးဆိုခကျြကိုကွညျ့မယျဆိုရငျ ဒီအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့ PDFနှငျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျကိုငျတှေ အငျးအားကွီးထှာလာတယျ အကွမျးဖကျစဈကောငျစီဘကျက အငျအားခြော့နညျးလာတဲ့အခြိနျမှာ အပဈခတျရပျစဲဖို့ တောငျးဆိုနတေယျဆိုတော့ စဈအကွမျးဖကျအဖှဲ့ကို အကာကှယျပေးခငျြတာလား မေးစရာရှိပါတယျ။
အာဆီယံ အထူးကိုယျစလဲ တောငျးဆိုတဲ့ ၄လအပဈခတျ ရပျစဲပီး ပွညျသူ့အာဏာ ပွညျသူကို ပွနျလှဲပေးအောငျ အာဆီယံက အာမခံပေးမှာလား မေးခှနျးထုတျစရာတှရှေိပါတယျ။
မွနျမာပွညျသူလူထုအတှကျ ဘာမှသခြော မြျောလငျ့လို့မရတဲ့ အာဆီယံ ဆီက ဘာမှမမြျောလငျ့ထားပါဘူး။ အာဆီယံရဲ့ လုပျရကျကို တဈခြိနျလုံးကွညျ့နတေဲ့ UN ဆီကလညျ မွနျမာပွညျ ဒီမိုကရစေီ ပွနျရောကျဖို့ ဘာမှမြျောလငျ့မထားပါဘူး။
ကမ်ဘာ့အဖှဲ့စညျးမဟုတျပဲ ကမ်ဘာ့တဈနိူငျံငံခငျြးဆီက အဓိက မဟာမိတျနိူငျငံမြားဆီကပဲ အကူအညီတှပေဲယူနပေါတယျ။UNနှငျ့ အာဆီယံဆီနှငျ့တော့ ဒီတိုငျးပဲ လုပျစရာရှိတာ ဆကျလုပျသှားမယျ။ စဈတိုကျရငျး ဆကျသှားမှာပါ။
UNအနနေဲ့လညျ အာဆီယံရဲ့ လုပျရကျထပျကွညျ့မယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာပွညျသူတှကေ ဘယျလောကျထိ ထပျစောငျ့ရအုံးမှာလာလဲ? ဘယျတော့ အကောငျထညျဖျေါနိူငျမလဲ မသခြောတာကိုသိလို့ ကြှနျတျောတို့ NUGအစိုးရအနဖွေငျ့ ပွညျ့သူ့ ကာကှယျရေး တပျဖှဲ့ PDF ဖှဲ့စညျးပွီးတော့ ဝါရငျ့ တိုငျးရငျးသား လကျနကျတှရေဲ့အကူညီပူပေါငျးဆောငျရှကျမူနှငျ့ လူငယျတှကေို စဈသငျတနျးတှပေေးနတော အခုဆိုရငျ ၅၀% က စဈသငျတနျးတှေ ဆငျနကွေပါပွီ။
NUGအစိုးရဟာ ပွညျသူကို ကိုယျစားပွုတဲ့အစိုးရဖွဈသလို ပွညျသူက မှေးဖှားလာခဲ့တဲ့အစိုးရပါ ဒါကွောငျ့ ပွညျသူတှေ လိုလား တောငျးတနတေဲ့ ဒီမိုကရစေီ အပွညျ့အဝရရှိဖို့က ကြှနျတျောတို့ NUGအစိုးရမှာ အပွညျ့ဝ တာဝနျရှိပါတယျ။
တဈဘကျကလညျ အကွမျးဖကျစဈအုပျစုဟာ ဆကျလကျပွီးတော့ ပွညျသူတှအေပျေါ အကွမျးဖကျနဆေဲ သံတမနျနညျးလမျးနှငျ့ ဘယျလိုမှ ရှဆေ့ကျလို့မရပါဘူး သူတို့က လူလိုသူလို ပွောတာမှနားမလညျပဲ ဒါကွောငျ့ လကျနကျကို လကျနကျနဲ့သာ ဖွရှေငျးဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျတာပါ။ ဒါကွောငျ့ D’ day ဖွဈလာခဲ့တာပါ။
အခုဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့မှာ လူအငျအား လကျနကျအငျအား နညျးပညာ အငျအား စဈအကွမျးဖကျအုပျစုကို တိုကျဖွတျဖို့ အလုံအလောကျရှိနပေါပွီ။
ကြှနျတျောတို့ အရေးတျောပုံကွီးက အောငျမွငျပွီးသားပါ။စနဈကို ပွောငျးဖို့ပဲ ကနျြတော့တာပါ။NUG အစိုးရရဲ့ ပွောခှငျ့ရ ပုဂ်ဂိုလျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောရှကျရေး ဝနျကွီး Dr.ဆာဆာမွနျမာပွညျကွီး ဘုရားခငျကောငျးခြီးပေးပါစေ။
ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရက စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းက သံတမန်နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးခဲ့တယ် နိူင်ငံရေးကို နိူင်ငံရေးလိုပဲသွားခဲ့တာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူကြီးမင်းတို့ သိကြတယ်မဟုတ်လား။
ကမ္ဘာ့အကြီးမာဆုံး အဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ UN ကလည်။ အာဆီယံကို တောက်လျှောက်ကြည့်လာခဲ့ကြတယ်။ အာဆီယံရဲ့လုပ်ရက်ကလည် မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဘာမှထိထိရောက်ရောက် လုပ်ပေးနိူင်တာမရှိခဲ့ဘူး။
တစ်ဘက်က ပြောမယ်ဆိုရင် အာဆီယံအထူးကိုယ်လဲရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ PDFနှင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တွေ အင်းအားကြီးထွာလာတယ် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က အင်အားချော့နည်းလာတဲ့အချိန်မှာ အပစ်ခတ်ရပ်စဲဖို့ တောင်းဆိုနေတယ်ဆိုတော့ စစ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကို အကာကွယ်ပေးချင်တာလား မေးစရာရှိပါတယ်။
အာဆီယံ အထူးကိုယ်စလဲ တောင်းဆိုတဲ့ ၄လအပစ်ခတ် ရပ်စဲပီး ပြည်သူ့အာဏာ ပြည်သူကို ပြန်လွဲပေးအောင် အာဆီယံက အာမခံပေးမှာလား မေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် ဘာမှသေချာ မျော်လင့်လို့မရတဲ့ အာဆီယံ ဆီက ဘာမှမမျော်လင့်ထားပါဘူး။ အာဆီယံရဲ့ လုပ်ရက်ကို တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတဲ့ UN ဆီကလည် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ပြန်ရောက်ဖို့ ဘာမှမျော်လင့်မထားပါဘူး။
ကမ္ဘာ့အဖွဲ့စည်းမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာ့တစ်နိူင်ံငံချင်းဆီက အဓိက မဟာမိတ်နိူင်ငံများဆီကပဲ အကူအညီတွေပဲယူနေပါတယ်။UNနှင့် အာဆီယံဆီနှင့်တော့ ဒီတိုင်းပဲ လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်သွားမယ်။ စစ်တိုက်ရင်း ဆက်သွားမှာပါ။
UNအနေနဲ့လည် အာဆီယံရဲ့ လုပ်ရက်ထပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေက ဘယ်လောက်ထိ ထပ်စောင့်ရအုံးမှာလာလဲ? ဘယ်တော့ အကောင်ထည်ဖေါ်နိူင်မလဲ မသေချာတာကိုသိလို့ ကျွန်တော်တို့ NUGအစိုးရအနေဖြင့် ပြည့်သူ့ ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ PDF ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ ဝါရင့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်တွေရဲ့အကူညီပူပေါင်းဆောင်ရွက်မူနှင့် လူငယ်တွေကို စစ်သင်တန်းတွေပေးနေတာ အခုဆိုရင် ၅၀% က စစ်သင်တန်းတွေ ဆင်နေကြပါပြီ။
NUGအစိုးရဟာ ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့အစိုးရဖြစ်သလို ပြည်သူက မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အစိုးရပါ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ လိုလား တောင်းတနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝရရှိဖို့က ကျွန်တော်တို့ NUGအစိုးရမှာ အပြည့်ဝ တာဝန်ရှိပါတယ်။
တစ်ဘက်ကလည် အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေအပေါ် အကြမ်းဖက်နေဆဲ သံတမန်နည်းလမ်းနှင့် ဘယ်လိုမှ ရှေ့ဆက်လို့မရပါဘူး သူတို့က လူလိုသူလို ပြောတာမှနားမလည်ပဲ ဒါကြောင့် လက်နက်ကို လက်နက်နဲ့သာ ​ဖြေရှင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့် D’ day ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။
အခုဆိုရင် ကျွန်တော်တို့မှာ လူအင်အား လက်နက်အင်အား နည်းပညာ အင်အား စစ်အကြမ်းဖက်အုပ်စုကို တိုက်ဖြတ်ဖို့ အလုံအလောက်ရှိနေပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့ အရေးတော်ပုံကြီးက အောင်မြင်ပြီးသားပါ။စနစ်ကို ​ပြောင်းဖို့ပဲ ကျန်တော့တာပါ။NUG အစိုးရရဲ့ ပြောခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောရွက်ရေး ဝန်ကြီး Dr.ဆာဆာမြန်မာပြည်ကြီး ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။
စာသငျရမယျ့ အရှယျတှဖွေဈပမေယျ့ တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားရငျ မိမိအသကျကိုကာကှယျဖို့ လကေ့ငျြ့နကွေတဲ့ ခငျြးကလေးငယျလေးတှရေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျ
Nug မှ D-Dayေ‌ကွငွာပွီးနောကျ‌နေပွညျတျောအတှငျး ရဲတပျဖှဲ့ဝငျအခငျြးခငျြးပငျ စဈဆေးမှု့မြား ပွုလုပျနေ